မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များ ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များ ရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၁)ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်စက်ရုံ (မင်းဘူး)မှ ပရိုပိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၁၀၀ တန်(တန်တစ်ရာတိတိ)၊ ဗြူတိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၁၀၀ တန်(တန်တစ်ရာတိတိ)နှင့် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု(သံပရာကန်)မှ ဗြူတိန်းရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၂၀၀ တန်(တန်နှစ်ရာ တိတိ) စုစုပေါင်း ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် ၄၀၀ တန် (တန်လေးရာတိတိ) (ပရိုပိန်း - ၁၀၀ တန်၊ ဗြူတိန်း-၃၀၀ တန်) တို့ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်တင်သွင်းသိုလှောင်သယ်ယူဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခွင့်လိုင်စင် လိုင်စင်(ခ) လက်ဝယ်ရှိသူများ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးစီမံကိန်းများဌာနမှ ၆၆ ကေဗွီ အသုတ် - ဂွ ဓာတ်အားလိုင်းတွင် OPGW Joint Box (၃၀) လုံး တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်။
ELECTRIC POWER GENERATION ENTERPRISE, REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) Assignment Title: Preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the New Ywama Power Plant in Yangon Reference No. EPGE-G02/2017 The Government of Myanmar is processing to apply financing from the World Bank toward the cost of the New Ywama Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services. The World Bank is also now No Objection for the selection of this consultant service during loan application process.
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၅)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(ကန်ကြီးထောင့်)မှ (၁)လအတွင်းထွက်ရှိသော ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ၅,၀၀၀တန်(တန်ငါးထောင်)ခန့်အား (၁)လ အတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) ၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ အမှတ်(၄)ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ(မြောင်းတကာ)မှ (၁)လအတွင်းထွက်ရှိသော ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ၅,၀၀၀တန်(တန်ငါးထောင်)ခန့်အား (၁)လ အတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။